A seminar on how to combat covid physically and mentally during coup…. – PVTV Myanmar
A seminar on how to combat covid physically and mentally during coup….
·6months ago ·50 Comments
A seminar on how to combat covid physically and mentally during coup.
– Kyar Pauk
– Dr Phio Thiha
– Ma Khin Hnin Kyi Thar
– Dr Phyu Phyu Thin Zaw
– Ma Phyu Pann Nu Khin
Like – 11K Share – 2412
Khin Moe Lwin says:
2021-07-18 at 6:58 PM
Thanda Aye says:
Khinmyo Win says:
2021-07-18 at 7:07 PM
Respect you all with thanks
2021-07-18 at 7:15 PM
2021-07-18 at 7:22 PM
2021-07-18 at 7:25 PM
All of those tragedy sources is MAL.
Saw Sein Htwe says:
2021-07-18 at 7:31 PM
moderator က ဘယ်လိုချည်းလဲ။ ကိုကျားတို့က ပြန်နားထောင်နေရပါလား။
Manam Seng Bu says:
2021-07-18 at 7:33 PM
Nyein Htet Aung says:
ကျတော်တို့ဟာ သူတို့ကို ရူံး နေပြီလားဆိုတာကို တခါတလေ ခံစားနေရတယ်ဗျာ
Khayu Ma says:
LJoshua Mk says:
2021-07-18 at 7:40 PM
we can’t breath, give back our our freedom, Health care💧💦🙏
2021-07-18 at 7:47 PM
အိမ်ကသမီးလေးတောင် ပြောပါတယ် MAH is partner in crime with Covid 19 ဆိုပြီး
yes agree with ko KP
Poe Khu Sel says:
2021-07-18 at 7:50 PM
တိုက်မှာပဲအဆုံးထိ ဘာလာလာ အဓိကဒီမိုဂရီစီရဖိုအရေးကြီးတယ်
Loong Mawkham says:
2021-07-18 at 7:59 PM
အိမ်တွင်း ၂၁ရက် မထွက်ကြဘဲ Transmission chain ကျအောင်လုပ်လိုက်ပါ ဆိုတာ မှတ်သားရပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒေါက်တာ ခင်ဗျား
Chit San Maung says:
2021-07-18 at 8:02 PM
ကိုကျားကို မေးခွန်းတစ်ခု မေးချင်ပါတယ်။ သွားဆရာဝန်တစ်ယောက်မို့ ပါ။ အခုကိုဗစ်ကာလ မှာသွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာ ရှိတဲ့လူတွေအတွက် ဒီကြားကာလ မှာ သွားပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကလေးလူကြီးတွေကို သွားရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကာကွယ်နိုင်မယ့်အခြေခံအကြောင်းလေး နည်းနည်းပြောပြပေးပါလား ။
2021-07-18 at 8:03 PM
ကျတော်တို့ အရာအားလုံးကို ဖြတ်ကျော်နိင်ရမယ်
Ye Wint Aye Htun says:
2021-07-18 at 8:04 PM
pls ask about the national vaccination program. people won’t die much if we did vaccination in our country. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2021-07-18 at 8:06 PM
ဒေါက်တာခင်ဗျာ လူကြီးတချို့ကရှေးရိုးနည်းနည်းစွဲနေလို့ ကိုဗစ်နဲ့ဖျားနေတုန်း ငှက်ပျောသီးစားတာ၊ထမင်းနဲ့ဟင်းလိုအစာကြမ်းစားတာမျိုးဟာ ပိုပီးဖျားနေတာကိုကြာရှည်စေတာလား နောက်တစ်ခုက ကိုယ်အပူချိန်ရှိနေတုန်းမှာ immune system ကောင်းမဲ့ဘယ်အစားအစာမဆိုစားသုံးသင့်ပါသလား ခင်ဗျာ
2021-07-18 at 8:12 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ယခုလို ပညာရှင်တွေရဲ့စကားတွေ ကြားရတာ အားလည်းတက်ပါတယ်
505 တေအတွက် မေးပေးတာ
Kyaw Min OO says:
2021-07-18 at 8:25 PM
Respect to you all 🥰
MT Khaing says:
2021-07-18 at 8:30 PM
နာဂစ် က အကောင်းဆုံး ဥပမာ ပဲ။
Tun Lay says:
2021-07-18 at 8:33 PM
မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံး အောင်မြင်ပီး မအလ မင်းအောင်လှိုင် အမြန်ကျဆုံးပါစေ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်
Serena Shirley says:
2021-07-18 at 8:34 PM
That kind of positive mindset ❤
Hla Hla Myat says:
2021-07-18 at 8:36 PM
We will fight together!!!
ကျေးဇူးပါ ဝန်ကြီး ခင်ဗျာ
2021-07-18 at 8:39 PM
CDM are our Heroes 🙏
ဟုတ်ပါတယ် teleကျန်းမာ တော်တော် အဆင်ပြေပါတယ်ရှင့်🙏
2021-07-18 at 8:51 PM
2021-07-18 at 8:53 PM
2021-07-18 at 8:57 PM
2021-07-18 at 8:59 PM
Thank you all for your kind advices.Our people needs more mental supports.😍
Tin Tun Oo says:
2021-07-18 at 9:00 PM
နိုင်ကို နိုင်မှာ။ 100 % ယုံကြည်ပါတယ်။
Ma Phyu says:
2021-07-18 at 9:01 PM
2021-07-18 at 9:02 PM
တော်လိုက်တာ တစ်ခါမှမတွေးဖူးခဲ့ဘူး Thanks #MaPhyuPannKhin🙏
Thazin Kyaw Lwin says:
2021-07-18 at 9:03 PM
Thet Oo Paing says:
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျ
2021-07-18 at 9:05 PM
တို့ပြည်သူမှာ ပြည်သူပဲ ရှိတာပါ
Ei Myat Sandi Win says:
2021-07-18 at 9:06 PM
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အားလုံး ကျန်းမာကြပါစေ💛
Thiha Myat Mon says:
2021-07-18 at 9:07 PM
Thinzar Naing says:
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ရဲ့ ဝန်ကြီးဌာနနှစ်ခုရဲ့ တရားဝင် အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေ စ…